Archive du 20180613
Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy Vonona hiara-kiasa amin`ny CENI
Tafatsangana ny governemantan’ny marimaritra iraisana ary afaka nifanaraka ihany ireo vondron-kery politika eto Madagasikara. Manana andraikitra goavana ny governemanta Ntsay amin`ny fanatanterahana fifidianana sy fampandehanana raharaha ary ny fiainam-pirenena.
Rado Rabarilala “Hijoro ny sendika raha hijanona ny depiote”
3 taona tsy nandray karama izahay teo anivon’ny Air Madagascar, hoy i Rado Rabarilala omaly teny amin’ny kianjan’ny 13 mey. Maro loatra ny tsy rariny teto ka tsy misy resaka be atao fa dia miala aloha ny filoha Rajaonarimampianina izay vao azo heverina ny hiverenana amin’ny resaka an-databatra.
CNaPS – EEM Natomboka tany Antsiranana ny fiofanana
Taorian’ny sonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona filohan’ny foibe Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) sy andriamatoa Arizaka Rabekoto Raoul Tale Jeneralin’ny CNaPS dia nidina avy hatrany tany amin’ny Diosezin’Antsiranana ny EEM foibe sy ny CNaPS foibe.
Mbola lavitra e…
Fa dia tena lany olo-manga sy olona mahavita azy tokoa ve eto amin’ity firenena ity e ? Aiza ve ka olona 8 monja tamin’ireo mpikamban’ny governemanta vaovao 30 ankehitriny no tsy mbola minisitra fa ny rehetra dia ny efa teo no notazonina sy naverina, ka dia ny tonta ihany no havadibadika, hoy ny fitenenana.